Odisha Weekend Getaways | Ebe kacha mma maka njegharị izu ụka
Ọ na-esiri ike ịmepụta njem karịsịa mgbe anyị na-arụ ọrụ 9 na 5 n'ụbọchị izu. Ma gịnị banyere ngwụsị izu? Enwere izu 52 n'afọ. Kedu ka ị ga esi eji ha? Ọtụtụ mmadụ ndị na-adịghị egwu na-eme njem na-eme ka ha chee na ha enweghị oge zuru ezu ịga ebe ọ bụla ma ọ bụ ụlọ ahịa ma ọ bụ ihe nkiri nkiri. N'ọnọdụ ọ bụla, nke ahụ abụghị ụzọ kasị mma ị ga-esi ebi ndụ! Ụzọ kachasị mfe iji kwalite ngwụcha izu gị bụ site n'ịga njem njem na njem Odisha Weekend na Sand Pebbles Tours.
Ịga njem adịghị apụta n'ezie na ị ga-efe ọtụtụ kilomita iji jee ebe ị na-aga. Mgbe ụfọdụ, ihe ị chọrọ bụ ngwụsị izu na ụgbọ ala nwere mmanụ ọkụ zuru ezu.
Ihe nchịkọta ndị mara mma nke na-ejide ebe a na-eme njem nlegharị anya nke izu ụka emeela ka ndị njem si mba ọzọ na ndị na-elekọta ụlọ. Akwụkwọ akụkọ ahụ na-agbalị ichebara ọdịmma dị iche iche nke izu ụka ezumike izu ike enyela Sand Pebbles ike iji mee ka ọ na-anụ ọkụ n'obi ma nwekwuo ihe dị mkpa maka nzukọ dịka maka iji obi ike na ekele. N'ihi ya, nchịkọta ndị e jiri nyocha zuru ezu gụnyere Bhubaneswar, Puri, Konark, Chilika, Bhitarkanika na ndị ọzọ.
A na-eji nlezianya ime mmụọ na Odide Weekends na-emepụta Odisha Weekend, njem nlegharị anya Honeymoon, njem nlegharị anya na ezinụlọ na ndị enyi na nlegharị anya gburugburu ebe obibi.
Ụlọ maka njem niile na nchịkọta gụnyere nri ụtụtụ na ebe nleta njem. Ugbo ala kachasị nke oge a ụgbọ ala ụgbọala & ụgbọala ndi oru ugbo na ndi a zoputara bu ndi iwu. A na-ahazi hotels ndị mara mma na ihe eji enyere ndị mmadụ aka na-eche echiche maka ịnye ndị ahịa niile n'ime ndị njem nleta na-aga Odisha.
Ntughari Mgbakwunye Ime Mmụọ